96W 192W Amanzi angamanzi angama-IP65 DMX RGB okanye i-LWW-2 iWD-LED,Ukukhanya Kwe-washer Ukukhanya Kwe-led,Guzheng Town Led Home Decorative,Constant Current Led Products - KwiChina 96W 192W Amanzi angamanzi angama-IP65 DMX RGB okanye i-LWW-2 iWD-LED, Umvelisi noMboneleli
96W 192W Amanzi angamanzi angama-IP65 DMX RGB okanye i-LWW-2 iWD-LED. UKWENZA KWENKQUBO YOKWENZA IWALL Uluhlu olutsha oluthambileyo kwiintambo ze-Festive kunye neempembelelo zangempela yi-LED Wall Washer series, ekwakheni isimo sengqondo esifanelekileyo, sinika ukukhanya okuvela kwimvelaphi. Inokusetyenziswa kwakhona phezu kommandla onqabileyo kunempembelelo enkulu, ingakumbi xa kusetyenziswe amanani amaninzi kunye nokufihla imimandla emikhulu eneempembelelo ezinamandla. Iingubo zethu zokuhlambela i-LED zisebenziseka kakhulu ukuhlobisa kunye nokugqamisa isakhiwo okanye umyezo. Uluhlu lwethu lubandakanya umbala wokutshintsha i-washers eyenza imibala emininzi, njengokugqithisa, ukutshabalalisa okanye ukugxotha. Ingasebenza kwimodi emelekileyo kunye ne-DMX mode, enokuvelisa imibala eyahlukileyo yokutshintsha imibala, njengokutshisa, ukutshala, ukuqhubekayo, ukukhanya kweembala ezisixhenxe ze-jump synchronously njl njl njll I-DMX 256 yegrey degree degree dimmer, i-DMX ilungelwe (amawaka eempembelelo ezikhoyo ukuba izibane ezininzi zidibanisene kunye). Imodi yolawulo lokukhanya: Imodi ezizimeleyo / I-Master / Mode Slave / DMX / RGB okanye i-Steady( 96W 192W Amanzi angamanzi angama-IP65 DMX RGB okanye i-LWW-2 iWD-LED )
96W 192W Amanzi angamanzi angama-IP65 DMX RGB okanye i-LWW-2 iWD-LED
©2005-2018 Karnar Qhagamshelana nathi Imephu yomhlaba Last modified: January 22 2021 03:28:34.